भिडियो – Sudur Sanchar
केहि समय अगाडि पाँचथर घर भएका अर्जुन आफ्नी श्रीमती र छोरा सहित ज्याला मजदुरी गर्दै चितवन बस्दै आए थिए । चितवन बाटै श्रीमती हराएको भन्दै अर्जुन मिडियामा आएका थिए । राम्रोसगँ बोल्न नसक्ने अर्जुनले ९ वर्ष अघि बिबाह गरेका थिए । बिहे गरेको ९ वर्ष पछि बोल्न नसक्ने अर्जुन र पाँच वर्षको छोरालाई छोडेर श्रीमती अर्कै नाठो लिएर फरार भएकी थिइन् । अर्जुन मिडियामा आए पछि उनकी श्रीमतिको निकै खोजी भएको थियो । उनलाई केही दिन अघि फेला पारिएको थियो । तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनि गाउँपालि टोर्केमा घरजम्म गरेर बसेको अवस्थामा अर्जुनकि श्रीमतीलाई मिडियामा भेटेको थियो । भेटिए पछि अहिले अर्जुन कै घरमा आएर उनकी श्रीमतिले अर्जुनलाई अर्कै बिबाह गरि बस्न आग्रह गरिन । सधै आफुले मात्र दुख गर्नु परेकोले आफुले छोडेर गएको उनको भनाई छ । अर्जुनले केहि काम नगर्ने भएकोले आफू बस्न नसक्ने उनको भनाई छ । आफू यहा अर्जु
विद्या उप्रेतीले आफ्नो ९ महिनाको गर्भ सहित झु’न्डि’एर आ’त्म’ह’त्या गर्नुको खुल्यो र’हस्य (भिडियो सहित)
झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका १३ बस्ने बिद्या उप्रेती ९ महिनाको गर्भ सहित आफ्नै घरमा झु’न्डि’एको अवस्थमा फे’ला परेकी छिन । बच्चा जन्मिन लागेको बेला बिद्या झु’न्डि’ए’को अवस्थामा भेटिए पछि उनका माइती पक्षले बिद्याले आ’त्मा’ह’त्या गरेको नभै उनको ह”त्या गरेको बताएका छन । बिद्याकि आमा सिताको भनाइ अनुसार छोरिलाई ज्वाइ बिबेक भट्टराईले कु’ट’पि’ट गरेर मा’रे पछि झु’न्डि’ए’को बताएकी छिन । बिद्यालाई घर परिवारमा सधै दाइजोको नाममा या’त’ना दिने गरेको आमाले बताएकी छिन । छोरिलाई मा’रि’ए’को या म’र्न बा’ध्य बनाएको भन्दै उनले छानबिनको माग गरेकी छिन । बिद्याको मृ”त्युको खबर पाए पछि आफुहरु छोरी म’रे”को ठाउँ पुग्दा ज्वाइँ बिवेक हाँसी रहेको आफुहरुले देखेको सिताको भनाइ छ । म”र्नु भन्दा अगाडि बिद्याले आफुलाई माछा खान्छु भन्दै बनाउन लाएर फोन गरेको आमा सिताले बताएकी छिन । अहिले छोरिले आफुलाई खा
मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका ९ घर भएकी १५ वर्षकि सुमना दनुवार मामा पर्नेसगँ फरार भएकी छिन । उनी इन्डिया घरमा भएका २४ वर्षका भरत वि.क सँग फरार भएकी हुन । १ महिना देखी छोरी हराएको भन्दै सुमनकी आमा वसन्ती दनुवार मिडियामा आएकि छिन । छोरी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दै आएको आमा वसन्तिको भनाइ छ । भरतको घर इन्डिया भएनी २ वर्ष अघि देखि उनी दिदिको घरमा बस्दै आएको बसन्तीले बताएकी छिन् । छोरी सुमनाको सानै उमेर भएकोले आफुले कहिले संका नगरेको आमा वसन्तीले बताएकी छिन् । भरत पहिले देखी आफ्नो घर आउने जाने गरेको आमाको भनाइ छ । घरमा आउँदा नि मामा भान्जी साइनोले नै बोल्ने गरेको आमा वसन्तीले बताएकी छिन । फरार हुनु भन्दा अघि बिहे खानको लागी पुर्व झापा गएकि वसन्ती कएहि दिन उतै बस्छु भनेर गएको भएता पनि केटाले फोन गरेको गरै गरेर दुई दिन अघि नै आएको आमाको भनाइ छ । बेलुकाको लगभग ५ बजे तिर बिरा
Jan62022 by Bibek PoudelNo Comments
पोखरा महानगरपालिका ५ को जिरो किलोमीटरमा रहेको पामे चापाकोट सुनचाँदी पसलबाट एक जना महिलाले सुन चोरेर फ’रा’र भएकी छिन । उनले त्यहा सुन चो’रे’र बशिर निस्किए पछि हतारमा कुदेको दृश्य पसलमस भएको सिसि क्यामेराले देखाएको छ । छोरा सुन लिन बहिर गएको बेला बृद्ध बुवालाई त्यो देखाउनु यो देखाउनु भन्दै मिठा मिठा कुरा गरेर सुन लिएर फ’रा’र भएको सुन पसलका वृद्धले बताए । एकछिन पछि आउछु भन्दै सुनको सिक्री लिएर महिला फ’रा’र भएकी हुन । महिलाले पसलमा आएर सिक्री हेर्दै मागेको उनले बताए । हेर्दै गर्दा यो मन परेन अर्को डिजाइनको सिक्री खोजेको भने पछि छोरा केशव मामाको पसलमा सिक्री लिन गएको केशवले बताएका छन । आफू मामाको पसलमा जादा बुबालाई पसलमा छोडेर गएको केशवको भनाइ छ । ती युवतीले सिक्री हेर्दै राख्दै फेरि हेर्दै गरेको केशवले बताएको छन । सबै भन्दा ठूलो लगभग १ तोला भन्दा माथिको सिक्री बुवाको आँखा छल
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको ह`त्या आरो`पमा प्रहरीले एकजना शं`का`स्प,द भारतिय नागरिकलाई प,क्रा,उ गरेर नेपाल ल्याएको छ । १० साउन २०७५ मा कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका उल्खाटामकी निर्मला पन्तको ब`ला`त्का`रपछि ह`त्या भएको थियो । १३ बर्षीया निर्मलाको ह`त्यामा संल`ग्न रहेको आ`शं`कामा प्रहरीले भारतिय नागरिक निकार अलीलाई प`क्रा`उ गरेको छ । १५ दिनअघि उनलाई प`क्रा`उ गरेपनि डिएनए रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले प्रहरीले गो´प्य राखेको छ । शं`का`स्पद अलीलाई नेपाल ल्याएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अ,प,राध अनुसन्धान विभागका एआईजी प्रद्यु,म्न कार्की गत साता कञ्चनपुर गएका थिए । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परिक्षणका लागी स्या`म्पल पठाइएको तर, रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । निकार अलि कञ्चनपुर स्थित निर्मला पन्तको ह`त्या भएको ठाउँ नजिकै तरका
काठमाडौं । रेखा थापा नेपाली फिल्म क्षेत्रकी चर्चित नायिका हुन्। फिल्म निर्देशक पनि बनिसकेकी रेखा अहिले एक्लै छिन्। निर्माता छविराज ओझासँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनले विवाह गरेकी छैनन्। विवाहबारे उनलाई हरेक कार्यक्रममा प्रश्न गरिन्छ। उनी मिलाएर जवाफ पनि दिन्छिन्। आफन्तसँग भेट हुँँदा होस् वा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा नै किन नहोस्, उनलाई विवाहको प्रश्न अनिवार्य आउँछ । अचेल भने उनले चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा रहेको बताउँदै आएकी छन् । हालै पत्रकार राज श्रेष्ठसँग टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रेखाले २०७९ सालभित्र आफू वैवाहिक जीवनमा बाँधिन सक्ने बताएकी छन् । अहिले आफू केटाको खोजीमा रहेको उनको भनाई छ । इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिरको व्यक्तिसँग घरजम बसाउने योजनामा रहेकी उनी आफ्नो लभ र एरेन्ज दुवै हुन सक्ने बताउँछिन् । आफ्नो हुनेवाला श्रीमान् आफू जस्तै मन र कुरा मिल्ने होस् भन्ने उनक
Dec282021 by Bibek PoudelNo Comments
बाघसँग ल’डेर बाघलाई मा’रेर आफू बाँच्न सफल बुवा मिडियामा( भिडियो सहित)
संसारमा पाँच प्रजातिका बाघ १३ मुलुकमा मात्र पाइन्छन् । नेपाल, भारत, भुटान र बंगालादेशमा मात्र पाइने बाघलाई पाटेबाघ भनिन्छ । कुनै समयमा नेपालको तराईका जंगल, भित्री मधेस, चुरे र भाहाभारतको काखमा प्रश`स्त पाइने पाटेबाघ वनजंगल अ,तिक्र,मित भएर वासस्थान खुम्चिन गई हाल आएर चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, पर्सा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरका वन क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । हाल नेपालभरि २३५ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र ९३ वटा वयस्क पाटेबाघ रहेका छन् । चितवन उपत्यकामा ८० वर्ष पहिले जुद्ध शमशेरको निमन्त्रणामा आएका ब्रिटिस राजाले १२० वटा बाघको सिकार गरेका थिए । एकपटकको सिकारमा मात्रै यति ठूलो संख्यामा बाघ मा’रियो भने त्यो समयमा तराईमा बाघको संख्या कति थियो भन्ने कुरा सहज अनुमान लगाउन गाह्रै हुन्छ । पछिल्लो समय बेलाबेलामा बाघले मान्छे मा’र्ने गरेको पाइन्छ यस्तै एउटा घ’
वल्र्डवाईड मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुती रहेको सर्ट मुभी ‘सागवाली’ सार्वजनिक भएको छ । वरिष्ठ अभिनेता तथा निर्देशक लय संग्रौलाको प्रमुख आतिथ्यतामा एक समारोहका वीच उक्त मुभी सार्वजनिक गरिएको हो । संचारकर्मी , गायक तथा कलाकार रामकृष्ण श्रेष्ठको निर्माण रहेको ‘सागवाली’मा मोडल सुनीता श्रेष्ठलाई मुख्य पात्र ‘सागवाली’को रुपमा देख्न सकिन्छ भने ‘सागवाली’मा स्वयं गायक श्रेष्ठकै समेत अभिनय रहेको छ । नेपालको मुख्य पेशा कृषिलाई पूर्ण व्यवसायिक र देशलाई कृषिमा निर्भर गर्न पर्छ भन्ने सन्देश दिनुका साथै जातीय विभेद अन्त्य सम्बन्धि जनचेतनामूलक कथामा आधारित सागवालीमा अन्य मुख्य कलाकारहरुमा जयराम बर्मा,मनराम केसी,मनोहर कार्की,रामकृष्ण न्याखा, मौसम श्रेष्ठ,सौगात श्रेष्ठ लगायतको अभिनय रहेको छ । सन्देश मुलक हुनुका साथै जातीय विभेदका वारेमा यथार्थ मुलक कथावस्तु वोकेको सर्टमुभीको गीतको शव्द स्नेहा श
केही दिन अघिको मात्र कुरा हो काठमाडौंको कलङ्किमा बसोबास गर्दै आएका भिमबहादुर तामाङ नाम गरेका एक पुरुषको उर्मिला तामाङ नाम गरेकि श्रीमती एक पुरुषसग फ”रार भएकी थिइन । तीन छोराछोरी र श्रीमानको बि”चल्ली बनाएर आफ्नै श्रीमानको कामदारसग भा”गेकि थिइन उर्मिला । श्रीमतीले यसो गरिदिदा यता भिमबहादुर म’र्नु न बाच्नु भएका छन भने उनका छोराछोरीहरु टु’हुरा भएका छ्न । रोहन तामाङ नाम गरेका उक्त पुरुष जो भिमबहादुरकै कामदारको रुपमा काम गर्थ्यो उसैले नै आफ्नी श्रीमती भ”गाउदा यता भिमबहादुर भने मर्नु न बाच्नु भएका छ्न । ठेक्कापट्टाको काम गर्ने भिमबहादुरले आफ्नै कामदारसग नै श्रीमतीले यसो ग,र्ली भनेर सोच्दा पनि नसोचेको शं”का गर्ने त ठाउँ नै नरहेको बताएका थिए । क”ठै ब”रा ती सानी छोरिले रुदै ममिलाइ छिटो आउनु भन्दै अनुरोध गरिन । भाइहरु सधै ममि कहिले आउने भन्दै रु”न्छ्न भन्छिन उनि । कस्ती क”ठोर महि
३.	चर्चित अभिनेत्री रायमा बन्द बोराभित्र शरिर दुई टु;;क्रा भएको अवस्थामा मृ;;त भे;;टिइन् (89)
५.	‘‘बिदेशमा बस्ने नेपालीले हुण्डीको प्रयोग गरिदिदा अप्ठ्यारोमा नेपाल सरकार! (81)
८.	गौतमबुद्ध विमानस्थलको उडान तोकियो, मलेसिया र खाडीका यी देशबाट नियमित उडान हुने ! (78)